“အပယ်ရတနာ” ၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်… | Layma's World
« “လေးမ” … ရှင်းလင်းပွဲ (ဒု) တစ်ကျော့ နှစ်ကျော့ … တေးကိုသီ … »
hninhnin, on August 27, 2007 at 12:35 pm said:
မမလေး … သိလား… မမလေးရဲ့ အပယ်ရတနာကိုဖတ်ပြီး သိုးလေးက သီတာဒေ၀ီကို သွားသတိရမိတယ်။ ဆရာချစ်ဦးညိုရေးတဲ့ ၀ိသာခါနှင့် သီတာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲက သီတာဒေ၀ီရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖတ်ရတာ အခု မမလေးရဲ့ အပယ်ရတနာလိုပဲ ခံစားချက်တွေအပြည့်… အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ မမလေးက စာအရေးအသား အရမ်းကောင်းလာပြီ။ သိုးလေး အားပေးနေတယ်နော်။
ဂျယ်ရီ, on August 27, 2007 at 1:35 pm said:
ငါသာလျှင် ဘုရင်ဖြစ်တော့သကိုး ။။။။ ဟိုး ဟိုး ဟိုး ။။။။
ထွက်ပြီးသား နှပ်ချေး ကို ပြန်ရှုံ့သွင်းရိုး ထုံးစံ မရှိဘူး နှမတော်
ရွှတ်!!! ဖတ် !!!
ထိုင်ပြီးသားခုံကလည်း ထပေးရိုး ထုံးစံမရှိပေဘူး ။။။။
အဟိးးး
ဒီလိုပေါ့လေ ..ဒီကိစ္စတွေက ..
ရှုထောင့်အသစ်ကတွေးပြီး ရေးတဲ့ သမိုင်းဇာတ်လမ်းတွေ ဖတ်ရတာမိုက်တယ် ။
ရေးတတ်တော့လည်း အသက်ပါတယ်။ ဆက်ရေးပေးပါဦးဗျို့
သဉ္ဇာ, on August 28, 2007 at 10:56 am said:
အစ်မရဲ့ ဒီ ပုဂံ စီးရီးစ် ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးဘဲ.. ဆက်ပြီး စောင့်ဖတ်နေဦးမယ်။ 🙂
ညလေး, on August 28, 2007 at 1:11 pm said:
လေးမရယ် ကောင်းပါလေ့ အဲ့လိုလေး များများတွေးပြီး များများရေးနိုင်ပါစေ…
ပြောဦးမယ် စာကြောင်းတွေကို Justify လုပ်ထားလိုက်ဦး ဖတ်ကောင်းအောင် ခုက မညီမညာနဲ့ 🙂
Layma, on August 29, 2007 at 4:04 pm said:
နှင်းနှင်းရေ … သိုးလေးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော် … မလေးလဲ အဲဒီစာအုပ်ရှာဖတ်ဦးမယ် …..။
ဂျယ်ရီ …ရွှတ်!!! ဖတ် !!!….တဲ့..၊ ညစ်ပတ်လိုက်တာ…ပုဆိုးနဲ့ သုတ်လိုက်…လေးမ စာရွက်တွေပေကုန်ဦးမယ် … ၊ ပုဂံရာဇ၀င်ကို တုတ်ထမ်းပြောရတယ်တဲ့ …လေးမကိုမြှောက်ပေးတာ ဘာထမ်းစေချင်လို့ လဲ …စတာပါ..ကျေးဇူး ..။
မသဉ္ဇာ… ကြိုက်တယ်ဆို အသစ်ရေးဖြစ်တိုင်း .. လာခေါ်မယ်နော်…။
မမညလေး …ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် … နောက်ပို့ စ်က စပြီး လေးမ ပြင်လိုက်မယ်နော် ….။